China Home haingo fampakaram-bady miloko volotara diffuser fitaratra aromatherapy tavoahangy mpamatsy sy mpanamboatra | Kingtone
Fampakaram-bady ao an-trano haingon-trano miloko volomaso diffuser fitaratra aromatherapy
Tavoahangy diffuser 80ml. Ity tavoahangy vera diffuser ity dia vita amin'ny vera tsy misy firaka avo lenta. Mampiasa ny haitao fanontam-pirinty ny orinasa mba hanodinana ny faran'ny vokatra sy hanamboarana ny LOGO. Izy io dia ampiasaina hitehirizana menaka manitra ao anaty, menaka manitra, menaka fanosotra, sns., Ary azo ampifandraisina amin'ny tsorakazo vita amin'ny ratana sy ny hazo fibre hanaparitahana ny fofona. Handravaka ny efitrano hanomezana anao rivo-piainana milamina sy mampiadana.
【QUALITY BE izahay dia zana-kazo manaparitaka mampiasa fitaovana fibre synthetic-friendly ho an'ny diffuser bararata. Mitovy amin'ny habe sy ny endriny, mahitsy sy malama kokoa noho ny bararata volotara rattan voajanahary, tsy misy poros amin'ny tendrony, feno loko tsara tarehy, Ny tehina fanaparitahana antsika dia miaraka amina fisongadinana rano mahery koa, fahafaha-mitahiry rano lehibe.
【Mora ampiasaina】 Ny tsora-kazo manaparitaka fofona dia natao hanatsarana menaka manitra tena mahomby kokoa ary hanaparitahana miadana ny fofona manodidina ny tranonao mandritra ny fotoana lava kokoa, azonao atao ny manitsy ny hanitra amin'ny alàlan'ny fanampiana / fanesorana diffuser hahazoana fahatsapana Mahazo aina.
【VOKANY TSARA】 Ny diffuser voninkazo dia miraikitra ankoatry ny fanaparitahana ny fofona, afaka haingon-trano koa izy io, hahatonga ny tranonao ho tsara tarehy kokoa ny biraonao!
Fampiasana indostrialy: Haingon-trano
Laharana modely: XZKTD171114
Anaran'ny marika: Kingtone
Size: Fepetra manokana takin'ny mpanjifa
Ohatra: Manangona entana
Fonosana sy fandefasana ：
Kitapo tokana: 5.6X5.6X15.8 cm
Lanjany tokana: 1.000 kg
Karazana fonosana: baoritra / paletaly fanondranana mahazatra na vita am-paosy
Manaraka: Tavoahangy vita amin'ny vera fitifirana fitaratra fitaratra tavoahangy diffuser
175ml tavoahangy diffuser menaka manitra aromatherapy ...